Switzerland Archives - 24 News Press
एनआरएनए स्वीट्जरल्याण्डको अध्यक्षमा एल्मर लामा सहितको कार्यसमिति निर्विरोध
स्वीट्जरल्याण्ड । गैर आवासीय नेपाली संघ स्वीट्जरल्याण्डको अध्यक्ष एल्मर लामा सहितको कार्यसमिति निर्विरोध चयन भ...
स्वीटजरल्यान्डमा गैर आवासीय नेपालीले गरे भारतीय अतिक्रमणविरुद्ध प्रदर्शन
स्वीटजरल्यान्ड: भारतीय अतिक्रमणविरुद्ध स्वीटजरल्यान्डमा गैर आवासीय नेपालीले प्रदर्शन गरेका छन् । हालै भारत सरक...
काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद स्वीजरल्याण्ड, महिला फोरमले आज ९२८, नोभेम्बर २०१८० मा न...
स्वीटजरल्याण्ड । अमेरिकामा कपडा उद्योगमा काम गर्ने मजदुर महिलाहरुले सम्मान काम, समान ज्याला लगायत महिलासँग सम...
Posted By: 24 News Presson: July 11, 2021
स्वीट्जरल्याण्ड । गैर आवासीय नेपाली संघ स्वीट्जरल्याण्डको अध्यक्ष एल्मर लामा सहितको कार्यसमिति निर्विरोध चयन भएको छ । आगामी कार्यकालको लागि नयाँ कार्यसमिति निर्विरोध चयन भएको हो । अध्यक्षमा शुभ एल्मर लामाको मात्रै उम्मेदवारी परेको थियो ।
यस्तै आईसीसी सदस्यमा सीमा गौतमको मात्रै उम्मेदवारी परेको छ । एनआरएन इतिहासमा अध्यक्ष र आईसीसी सदस्य दुबै महिला रहेको सम्भवत यो पहिलो पटक हो ।
यस्तै उपाध्यक्षमा प्रमोद कुमार भट्ट र शुक्र श्रेष्ठ, महासचिवमा कुल (कृष्ण) प्रसाद शिवाकोटी, सचिवमा जीवन भट्टराई, कोषाध्यक्षमा राकेश चन्द्र प्रजापती,महिला संयोजकमा चम्पा ज्ञवाली रुकस्टुल, युवा संयोजकमा विनु सुनार र प्रवक्तामा यम काउचा मगरको मात्र उम्मेदवारी परेपछि सिंगो कार्यसमितिनै निर्विरोध चयन भएको हो ।
अन्य केही पदहरूमा उम्मेद्वारी नपरेपछि पद रिक्त रहेको छ । एनआरएनए स्वीट्जरल्याण्डको सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आईतबार हुदैंछ । तर उम्मेदवारी मनोनयनको नामावली भने शनिवार प्रकाशन गरिएको थियो ।
अध्यक्षः शुभ एल्मर लामा
उपाध्यक्षः प्रमोद कुमार भट्ट, शुक्र श्रेष्ठ
महासचिवः कुल (कृष्ण) प्रसाद शिवाकोटी
सचिवः जीवन भट्टराई
कोषाध्यक्षः राकेश चन्द्र प्रजापती
आई सि सि सदस्य ः सीमा गौतम
महिला संयोजकः चम्पा ज्ञवाली रुकस्टुल
युवा संयोजकः विनु सुनार
प्रवक्ताः यम काउचा मगर
Posted By: 24 News Presson: November 27, 2019
स्वीटजरल्यान्ड: भारतीय अतिक्रमणविरुद्ध स्वीटजरल्यान्डमा गैर आवासीय नेपालीले प्रदर्शन गरेका छन् ।
हालै भारत सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्शामा नेपालको अविभाज्य भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा अनधिकृत रुपमा आफ्नो नक्शामा देखाइएको विरोधमा स्वीटजरल्यान्डमा गैर आवासीय नेपालीले विरोधस्वस्प प्रदर्शन गरेका हुन । ‘गो ब्याक इन्डिया फर्म नेपाल’ को प्ले कार्ड बोकेर गैर आवासीय नेपालीले विरोध गरेका हुन ।
गैर आवासीय नेपाली संघ स्विट्जरल्याण्ड, प्रवासी नेपाली एकता मञ्च स्विट्जरल्याण्ड र नेपाली जन सम्पर्क समिती स्विट्जरल्याण्डको संयोजनमा भएको विरोध प्रदर्शनमा यहाँ रहेका विभिन्न संघसंस्थामा आबद्ध गैर आवासीय नेपाली प्रतिनिधिको पनि सहभागिता रहेको एनआरएनए स्वीजरल्याण्डका महासचिव कृष्ण प्रसाद शिवाकोटीले जानकारी दिनुभयो ।
काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद स्वीजरल्याण्ड, महिला फोरमले आज ९२८, नोभेम्बर २०१८० मा नेपालको पहिलो अस्पताल वीर अस्पतालमा सहयोग स्वरुप ह्विलचेयर हस्तान्तरण गरेको छ।
वीर अस्पतालमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा एनसीसी स्वीजरल्याण्ड महिला फोरमका सल्लाहकार एवं पूर्व उपाध्यक्ष विजया भट्ट र गैरआवासीय नेपाली संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. हेमन्त दवाडीले महिला फोरमको तर्फबाट अस्पतालका निमित्त निर्देशक डा. सरोज शर्मालाई ह्विलचेयर हस्तान्तरण गरेका हुन्।
राष्ट्रिय समन्वय परिषद स्वीजरल्याण्डकी महिला संयोजक शुभ एल्मर लामाको संयोजनमा अस्पताललाई १२ वटा ह्विलचेयर प्रदान गरिएको हो। विशेषगरी वीर अस्पतालमा आउने सर्वसाधारण बिरामीको सेवाका निम्ति सो सहयोग गरिएको हो।
कार्यक्रमको सुरुवातमा गैरआवासीय नेपाली संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. हेमन्त दवाडीले एनआरएनए तथा महिला फोरमको बारेमा प्रष्ट पारेका थिए। कार्यक्रममा डा. शर्माले सहयोगप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा पनि निरन्तरता रहने आशा व्यक्त गरे।
कार्यक्रममा अस्पतालका तर्फबाट शर्मा सहित नर्सिङ विभागका प्रमुख रिना श्रेष्ठ र नाक, कान घाँटी विशेषज्ञ डा. जयेन्द्र प्रधानको उपस्थिती रहेको थियो। यस्तै संघका सचिवालय सदस्यहरु, तथा अन्य सञ्चारकर्मीको उपस्थिती रहेको थियो।
Posted By: 24 News Presson: February 13, 2018
गैर आवसीय नेपाली संघ महिला फोरम स्वीटजरल्याण्डले आउँदो मार्च १० मा १०८ औं अन्तराष्ट्रिय नारी दिवस कार्यक्रम भब्यरुपमा मनाउने भएको छ । बर्तमान अवस्थामा एन आर एन स्वीटजरल्याण्डले अन्य देश भन्दा पृथक र रचनात्मक कृयाकलापहरु एक पछि अर्को इतिहासं रच्दैँछ । ४ फेब्रुअरीमा भएको दुतावास तथा विभिन्न संघसंस्थाहरुको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नारि दिबस एन आर एन स्वीटजरल्याण्ड को महिला फोरम ले मनाउने सहमति भएको थियो । अघिल्ला बर्ष पनि महिला फोरमले नै कार्यक्रम गर्दै आईरहेको छ ।महिला फोरमकी संयोजक सुभा एल्मर लामाको संयोजकत्वमा १०८ औं अन्तराष्ट्रिय नारी दिवस मनाउने भएको हो । अन्तराष्ट्रिय नारी दिवस मार्च ८ मा मनाएतापनि स्वीटजरल्याण्डमा भने सार्बजनिक बिदाको अवसर पारेर मनाइन्छ। लामाको अनुसार यस बर्षको अन्तराष्ट्रिय नारी दिवस कार्यक्रम महिला जागरणको साथ साथै केहि परियोजनालाई सफल बनाउन आर्थिक सहयोग जुटाउने उधेश्य समेत रहेको जानकारी दिनुभयो ।